बरुणसँगको फिल्मबाट कट्रिनाले हात झिकिन् ? - Glamorous Icon
१६ पुष २०७५, सोमबार १४:३०
Home›GIcon News›बरुणसँगको फिल्मबाट कट्रिनाले हात झिकिन् ?
चलचित्र ‘रेश ३’का निर्देशक रेमो डिसोजाले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्रका लागि नायक बरुण धवन र नायिका कट्रिना कैफलाई फाइनल गरिएको थियो । यो चलचित्रको छायांकन जनवरी महिनाबाट सुरु हुने अपेक्षा पनि गरिएको थियो । चलचित्रलाई निकै महंगो बजेटमा तयार गरिने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका थिए ।
तर, अब यो चलचित्रबाट नायिका कट्रिना कैफले हात झिकेकी छिन् । नायिका कैफले समय नमिलेको कारण जनाउँदै चलचित्रमा काम नगर्ने बताएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । कट्रिना अहिले नायक सलमान खानसँग चलचित्र ‘भारत’मा काम गरिरहेकी छिन् । यो चलचित्रको छायांकन समयसँग रेमोको चलचित्रको छायांकन समय जुधेपछि कैफले हात झिक्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
नायिका प्रियंका चोपडाले काम गर्न नमानेपछि कैफले सलमानको चलचित्रमा काम गरेकी थिइन् ।
फाटेको जुत्ता’मा सौगात भन्दै छन् प्रियंकासँग ‘आई एम सरी…